मंगलबार, असोज २६, २०७८ ज्योति न्यूज डेस्क
वीरगन्ज । ‘अनि घर कहिले आउने त ?’ यो प्रश्न दसैँको पूर्वसन्ध्यामा खुब सोधिन्छ । हामीहरूमध्ये धेरै फूलपातीका दिन आइपुग्छु भन्ने धेरै हुन्छौं । यस दिनबाट बिदा शुरु हुन्छ । अनि यस दिनबाट चाहिँ दसैँको चाडबाडको मस्ती पनि शुरु हुन्छ । पहिलो साल कोरोना भाइरस त्रासले दसैँलाई एकलास बनाएको थियो । यस वर्ष अलिक खुकुलो हुँदै छ । फूलपातीको शुभकामना ।
चाडवाडहरू नभइदिएका भए हाम्रो जीवन कति निरश हुन्थ्यो होला ? चाडपर्वले जीवनलाई एउटा फरक उर्जारसले भर्ने गर्छ । यो दसँैपछि म यो गर्छु, त्यो गर्दिनँ भन्ने हाम्रा स्वप्रतिज्ञाहरू र योजनाहरू पनि छन् । दसँैले सबको इच्छा पूरा गरोस् । यो चाड सनातन हिन्दू मात्रको नभई तमाम नेपालीजनको हो, यसको मौलिक विशेषता भनेकै यही हो । तडक–भडक भन्दा पनि सामान्य जीवनशैली अनि असमान्य आत्मीयताका साथ चाड मनाउनुहोला । यो रमाइलो माहौलको शुभकामना ! जय होस् !!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २६, २०७८, ०८:०८:००